အိုင်စီဂျေကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အတွက် နိုင်ငံတ...
18 ธ.ค. 2562 - 00:45 น.
တပ်မတော်ကို အပြစ် ပုံချသလို မျိုးမဖြစ်အောင်သူ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြောသွားတယ်လို့ ထင်တယ်
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး အခြေအနေကောင်းလာ တယ်လို့ထင်
ကျွန်တော်တို့ ကတော်တော် ကံဆိုးတာ။ ၁၉၆၂ ကနေ ၁၉၈၈ အထိ ကိုယ်ဘာကိုယ်တံခါးပိတ်ခဲ့ကြတာ။ဘယ်သူမှ ပိတ်တာ မဟုတ်ဘူး။
อัลบั้มภาพ အိုင်စီဂျေကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အတွက် နိုင်ငံတကာ ပုံရိပ်ထိသွားနိုင်လား